Cayilka badan oo nafaqo darro keena - iftineducation.com
Cayilka badan oo nafaqo darro keena
iftineducation.com – Daraasad cusub ayaa sheegtay in heerka cayilka badan ee dunida oo dhan ku sii kordhaya uu dhalinayo nafaqo darro baahsan.
Sida caadiga ah nafaqo darrada waxa loo haystaa inay macaluushu keento, laakiin warbixinta nafaqada adduunka ee sanadkan 2016 waxay sheegtay in cayilka badan oo saameeya boqolaal milyan oo ruux uu laftiisu dadka ka dhigo kuwo nafaqo la’aan ah.
Dadka aadka u cayila dhiigooda waxaa ku bata sonkorta, milixda ama dufanka kuwaas oo aan ahayn nafaqo ku filan.
Warbixintu waxay sheegaysaa in arrintani ay tahay dhibaato soo foodsaartay caafimaadka adduunka iyo horumarkiisaba, waxay ku doodaysaa in haddii dhaqaale lagula dagaalamo la diyaariyo ay arrintaasi wax ka tari doonto mustaqbalka fog.
Donald Trump: Soomaalida Daacish ayay ku biiraan
Cudur kaduudiye loo bixiyay oo dhib ba’an ku haya koonfurta Soomaaliya